लक्ष्मी गदाललाई कालो मसो दल्दै कु'ट्ने सिर्जना वाग्लेलाइ डीबीको कडा चे'तावनी, अब के होला ?(भिडियो सहित) -
Homeसमाचारलक्ष्मी गदाललाई कालो मसो दल्दै कु’ट्ने सिर्जना वाग्लेलाइ डीबीको कडा चे’तावनी, अब के होला ?(भिडियो सहित)
May 4, 2021 admin समाचार 432
लक्ष्मी गदाल र सामा’जिक अभियन्ता भनिने सृजना वाग्ले बीच लक्ष्मी गदालकै कोठामा गएर हा’ना’हान चलेको छ। सृजना वाग्लेले आफूलाई त’था’नाम आरोप लगाएर बे’इ’ज्ज’त गरेकोले लक्ष्मी गदाललाई समाजबाट नि’काल्नु पर्छ भन्दै आ क्रो शि’त भएर उनको कोठामा ज’ब’र्ज’स्ति ढोका ठेल्दै ग’एकी थिइन् ।
भने लक्ष्मी ग:दाल पनि रि’स’ले आ’क्रो’शि’त बन्दै घ’रबे’टीलाई गु’हा’र्न आग्रह गर्दै थिइन्। लक्ष्मी गदालले आफूलाई बे’हुलीको नाटक गर्न लगाइ भद्रकाली म’न्दिरमा लगेको आ रो’प लगाउँदै सृजना वाग्लेलाई सुन्नै नसकिने मा…..क्ने, र….ण्डी जस्ता शब्दले गा’ली ग’रे’की थिइन्। त्यसपछि लक्ष्मी ग’दालको कोठामै छि’रे’र लक्ष्मी गदाललाई हा’त’पा’त समेत गरेकी छिन्। आफले दस लाख लिने योजना बनाएको कुरा स’म्पूर्ण रुपमा झुठो हो।
यसको लागि मैले वकि’ल,प्र’ह’री प्रशा’सन धेरै ठाउँमा गएँ तर अहिले आएर मलाई सा’माजिक रुपमा ब’द’ना’म गरि भन्दै आ’क्रो’श समेत पोखेकी छन् । यहि बिषयमा अ’भियानता डीबी लिम्बुले कडा रुपमा आफ्नो कुरा रा’खेका छन् । ओएसटिभि नेपालबाट
अण्डाको मूल्य हाल’सम्मकै उच्च
कोरोना महामारी : गर्भवती तना’बमा
August 30, 2020 admin समाचार 8750
सामान्य’तया जो केहिलाई पनि चिसोको समयमा हाडजो’र्नीको समस्या हुने गर्दछ । बढ्दो उमेरका मानिस’हरुलाई क्याल्सि’यमको कमीका कारण जोर्नी दुख्नु सामान्य कुरा हो । तर मानिसहरु यस्ता दुखाई कम गर्नका लागि विभिन्न औषधिको प्रयोग तथा पेनकि’लरको
ढाका टोपी लगाएर भारतीय गृहमन्त्री : नेपाल र नेपालीबारे दिए यस्तो अभिव्यक्ति
April 13, 2021 admin समाचार 1293
नेपाल र भारत’बीचको सम्बन्ध चिसिएकै समयमा भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह मंगलबार ढाका टोपी लगाएर सार्व’जनिक कार्यक्रममा स’हभागी भएका छन् । पश्चिम बंगालमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभामा उनले नेपाली मूलका मतदा’ताको विश्वास जित्न ढाका टोपी
January 9, 2021 admin समाचार 2758
अर्जुनको जन्म २६ नोभेम्बर १९७२ मा जब’लपुरमा भएको थियो। उनी सैन्य पृष्ठभू’मिको एक परिवारका हुन्। उनका हजुरबुवा ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंहले भारतीय सेनाका लागि पहिलो आ’र्टिलरी बन्दूक बनाएका थिए । अर्जुन सानै छँदा आमा बुबाको सम्ब’न्धविच्छेद